Sina Banana miendrika horonam-bokatra manamboatra sy orinasa | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Ny efijery mihetsiketsika karazana akondro Czxd dia karazana efijery mitovy andraikitra mavesatra mitovy lanja, izay ampiasaina betsaka amin'ny fanodinana fitiliana ny fitrandrahana volavolan-dalàna sy fitafiana hitafy lamba. Noho ny fandevonan-kanina sy ny fitrandrahana ny haitao mandroso vahiny, ny orinasanay dia namolavola sy namokatra efijery mihetsiketsika karazana banana czxd. Raha ampitahaina amin'ny sieve nentim-paharazana mitovy amin'ny famaritana azy dia lehibe kokoa ny fahafaha-manodina ny efijery mihetsiketsika akondro hozzd dia lehibe, ary 1,5 ~ 2 heny noho ny an'ny efijery fanasokajiana nentim-paharazana ny haben'ny fanodinana faritra iray. Izy io no efijery mandroso sy malaza indrindra ankehitriny.
Misy tehezan-tsolika iray eo amin'ny faran'ny fihinanam-bilona mihetsiketsika akondro volom-borona, izay manomboka amin'ny 34 ° ary avy eo milatsaka amin'ny faran'ny famoahana 10 ° miaraka amin'ny zoro maromaro. Ny hatevin'ny sosona ara-materialy avy amin'ny faran'ny sakafo hatramin'ny faran'ny famoahana dia maharitra. Ny valiny dia mampiseho fa ny tahan'ny habetsaky ny volan'ny materialy dia miorina, avo ny sosona fitaovana, ary ny fahombiazan'ny fitiliana dia mihatsara kokoa, izay avo 1-2 heny noho ny efijery mihetsiketsika miaraka amin'ilay faritra mahomby mitovy. Rehefa avo ny atin'ny sombin-tsakafo tsara indrindra, indrindra raha latsaky ny 1/2 amin'ny haben'ny sombin-kaonty ny votoatin'ny singa, ny efijery mihetsiketsika akondro vyzd dia manana fahombiazan'ny fitiliana avo.
tanjona Model Ny haben'ny fahana farany mm Ny fahaizan'ny fitsaboana t / h milina elektrika
fisokajiana ZXD-12 * 61 ≤300 130-420 2 * 11
dehydrationDisintermediation ZXD-12 * 61 ≤80 80-150 2 * 11
Previous: Fitaovana fahombiazan'ny singa marobe
Manaraka: Efijery azo ahodiana andian-tsarimihetsika Cfhs
Efijery mihodinkodina boribory